[OFISIALY] dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Transfer, Backup & Avereno
dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Transfer, Backup & Avereno
Hazavao ny WhatsApp Chat, Mora & Flexibly
Hamindra iOS WhatsApp ny iPhone / iPad / iPod mikasika / Android fitaovana.
Backup na fanondranana iOS WhatsApp hafatra amin'ny ordinatera.
Avereno iOS WhatsApp nomaniny ho solon'izay ny iPhone, iPad, iPod mikasika sy ny fitaovana Android.
Hamindra WhatsApp History Effortlessly sy fantenana
Na inona na manana mihoatra ny iray, na fitaovana fotsiny te-hanova ny taloha fitaovana vaovao iray, dia afaka mampiasa izany mba fantenana fandaharana hamindra ny WhatsApp amin'ny chat tantaran'ny eo ny iPhone sy ny iPad. Rehefa avy ara any amin'ny fitaovana Android, koa afaka manampy mba hamindra WhatsApp resaka avy amin'ny iPhone / iPad ny vaovao fitaovana Android. Ny zavatra tianao, anisan'izany ny kofehy mifamatotra.
Hamindra WhatsApp Messages fahaiza-mifantina
Afaka hamindra WhatsApp hafatra avy amin'ny iOS fitaovana ho fitaovana iOS na Android fahaiza-mifantina.
Backup WhatsApp Messages Mora
Azonao atao nomaniny ho solon'izay WhatsApp hafatra eo amin'ny iPhone / iPad ny solosaina iray tsindry.
Azonao atao ny mamaky ny tsipiriany rehetra eo amin'ny WhatsApp nomaniny ho solon'izay rakitra, toy ny hafatra sy ny kofehy mifamatotra. Hijery ny zavatra tianao.
Export Hafatra avy amin'ny WhatsApp Backup
Afaka fantenana hanondrana hafatra avy WhatsApp nomaniny ho solon'izay toy ny HTML rakitra. Fa tsara ho anao ny pirinty na mizara izany.
Ampodio WhatsApp Backup
Raha ny amin'ny hamerenana WhatsApp hafatra, dia afaka ampy handoavana izany na iOS sy ny Android fitaovana. Tena iray-tsindry asa.
Izany WhatsApp nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny fandaharam-potoana dia namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Backup na Export WhatsApp Resadresaka
Izany no mahatonga ny nomaniny ho solon'izay ny WhatsApp tantara mora kokoa noho ny hatramin'izay. Mampifandray ny iPhone / iPad sy manao tsindry iray, ny nomaniny ho solon'izay miasa mitokana. Ankoatra izany, dia afaka hanopy maso sy hijery izay zavatra tianao sy ny fanondranana azy ao amin'ny solosaina ho rakitra ho HTML mamaky teny na ny fanontam-pirinty.
Avereno WhatsApp Backup ny iOS / Android Fitaovana
Raha niresaka momba ny WhatsApp nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy, dia afaka mamafa azy ireo avy amin'ny solosaina raha tsy te-hiaro azy, ary afaka hampodiko ny iPhone / iPad na fitaovana Android, raha misy ilaina izany. Azo atao ao anatin'ny iray tsindry.
Izany ihany no mamaky ny angon-drakitra, tsy misy atahorana angon-drakitra.
100% soa aman-tsara rindrambaiko, manisy ratsy ny solosaina na fitaovana.
Tena misy ny olona, ​​tsy misy ny fahalalana teknolojia nanontany.
30 Day Free Fitsarana
Afaka manandrana ny rindrambaiko maimaim-poana nandritra ny 30 andro.
Supported iOS fitaovana
Any rakitra kofehy mifamatotra
iOS 10, iOS 9 sy teo aloha
dr.fone Toolkit Ampio aho namindra WhatsApp soa aman-tsara angona avy ny taloha Android Phone ny vaovao SE iPhone.
dr.fone Toolkit dia matihanina fampiharana natao mba sitrana antontan-taratasy avy amin'ny fitaovana Android mivantana sitrana voafafa SMS sy ny fifandraisana, anisan'izany ny anarana, isa sy ny adiresy e-mail, mba hanondranana azy ireo HTML, ary koa ny sary sy ny lahatsary very noho ny famafana.
Mey Kim, iOS
Fahafaham-po io rindrankajy tena tsara ho an'ny angon-drakitra hamerina WhatsApp.
Backup WhatsApp Messages Online amin'ny Android sy iPhone
Ahoana no mba hamerenana ny WhatsApp Messages amin'ny iPhone sy ny Android Fitaovana
Ahoana no sitrana voafafa WhatsApp Images / Sary,
Ahoana no fomba Backup na Export Hafatra avy amin'ny iPhone WhatsApp
Ahoana no Retrieve Messages amin'ny iPhone WhatsApp
WhatsApp Backup Extractor: Vakio ny WhatsApp Resadresaka amin'ny Computer
6 Fomba Backup WhatsApp Messages
Top 10 Free Software WhatsApp Recovery
Flexibly nomaniny ho solon'izay & indray viber Internet eo amin'ny iPhone, iPad, na ordinatera.